Global Voices teny Malagasy » Tontolo Arabo: hevitra nanoloana ny fandrarana minaret any Soisa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Desambra 2009 18:44 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Alzeria, Ejipta, Libanona, Maoritania, Soisa, Syria, Fampandrosoana, Fifidianana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Media sy Fanoratan-gazety, Vaovao Mafana, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Nanaiky ny handrarana  minaret vaovao [tilikambon'ny moske silamo] tamin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka ny alahady 29 Novambra lasa teo ny 57,5%-n'ny mpifidy Soisa, izay manori-dalana ho amin'ny fanitsiana ny Lalampanorenana. Any amin'ny fananganana tilikambo silamo vaovao – fa tsy ny moske – moa no iantefan'ity fitsapa-kevi-bahoaka ity fa tsy any amin'ny tilikambo silamo efatra efa mijoro ao Soisa ao.
Niteraka fanehoan-kevitra isan-karazany teo amin'ny tontolom-bolongana arabo sy miozolomana moa ity fandrarana ity: Raha nitroatra ny mpamaham-bolongana sasany, ny hafa kosa manamarika fa tsy manakana ny fanaraham-pivavahana tsy akory ny fandrarana ny fananganana minaret.
Namoaka lahatsoratra  manameloka ny fanapahan-kevitry ny Soisa ao amin'ity fehezan-kevitra ity ilay Libano-Amerikana Pierre Tristram mamaham-bolongana ho an'ny About.com:
Fa dia naninona loatra re ny 59 arivoarivo no dia vendrana tahaka izao? hoy ny lohatenin'ny gazety Britanika Daily Mail ny ampitson'ny nahalany an'i George W. Bush indray tamin'ny 2004. Dia afaka manampy fiteny vaovao ao amin'ny tahiri-keviny momba ny zava-mahamenatra indray ny Daily Mail hoe: Fa dia naninona loatra ny Soisa 3 arivoarivo no dia manavakavaka tahaka izao?
Ary dia nofaranan'i Tristram tahaka izao ny heviny: “Nihafoana haingana dia haingana ny fahasamihafana eo amin'ny ankapoben'olona any Soisa sy ny kabarim-panavakavahana  fanaon'ilay Iraniana  antsoina hoe Mahmoud Ahmadinejad .”
Nikaroka ny anton'izao safidy izao ilay mpamaham-bolongana Ejipsiana Hicham Maged , ka nafehiny fa :
Raha atao indraim-bava dia manantena aho fa hamakafaka indray izay nitranga ny vahoaka Soisa; tsy amin'ny resaka hoe miaro ve sa tsia ny zon'ny olom-pirenena ny lalàna, izay lohahevitra lehibe raha iadian-kevitra sy andehanana any amin'ny fitsarana soisa mba hahitsy, fa ny tena zava-dehibe ho ahy kokoa dia tokony ho lakolosy fanairana hialana amin'ny tsy fahalalàna izay tsy misy na inona na inona mameno azy afa-tsy tahotra, hatezerana ary fahadalana ~ na aiza na aiza ~ ity fahadisoana ity.
Mpamaham-bolongana Ejipsiana hafa izay manana ny anaran'ny bolongana manao hoe Not Green Data dia manaiky fa “ny moske dia moske,” saingy malahelo izy  fa manimba ny hakanton'ny moske ny fandrarana ataon'ny Soisa:
Mba azo visavisaina ve izany fromazy soisa tsy misy masony – ny lavadavaka – eo aminy izany? na antsipika soisa tsy misy tornevisy fa fanesorana bosoa izany? Dia tahaka izany indrindra no tadiavin'ny vahoaka Soisa atao amin'ny moske. Marina fa mbola mitoetra ho moske io na tsy misy tiilikambony aza, ary afaka manao tsara ny asany ny trano na tsy misy ireny aza. Saingy manimba be dia be ny hakantony sy ny maritrano manavaka azy izany.
Nifantoka tamin'ny endrik'afisy isan-karazany nataon'ny mpikatroka avy amin'ny andaniny sy ny ankilany tamin'ny fampielezan-kevitra kosa i Matthew Teller mpamaham-bolongana anglisy, mpanoratra momba ny fizahantany any Azia andrefana [Proche Orient hoy ny tandrefana]
Afisin'ny antoko Soisa SVP miantso ho amin'ny fandrarana ny minaret
ka mamelabelatra  ity afisy hitantsika ity:
Nampiasa ny antsoina hoe “fandalana ny vahoaka mikiakiaka” araka ny fiantson'ny Financial Times azy ilay antoko maharikoriko SVP manafangaro ny ‘vahiny’ any Soisa amin'ny mpanao heloka, mpanararaotra sy ny ratsiratsy kokoa aza, tamin'ny fanaovany ny afisy hitantsika manao hoe: “Stop! Ekena ny fandrarana ny minaret”. jereo ny sary: tahaka ny balafomanga ny minaret, mampatahotra ravehivavy, tahaka ny fanovan'endrika ny burqa [voaly], lokom-pampitahorana ny mainty, voaaloka avy atsinanana ny saina soisa, ary nahalavahana ny hazofijaliana.
Ilay Alzeriana-Amerikana The Moor Next Door kosa indray dia mahita ny fandrarana ho adim-pahefana ka manamarika fa :
Ho an'ny mpanohitra azy dia famantarana ny fahatongavan'ny Islam any amin'ny tangorombohitr'i Les Alpes ny Minaret. Mijoro hanambara ny fisian'ny Miozolomana eo ambonin'ny finoana sy ny vahoaka hafa izy io. Ny fandrarana io dia fandrarana ny mariky ny hery sy ny fisian'ny Miozolomana
Ny hakanton'ny fiavahana, ny heriny, izay no tena ao ambadik'ity raharaha ity. Izao no lalana hitan'ny olona tsy tena mahalala ny maha-izy azy ka mitsipaka ny maha-izy azy an'ireo hafa tonga taty aoriana.
Manana fomba fijery miavaka amin'izay zava-dehibe indrindra amin'ity raharaha ity ilay mpamaham-bolongana Syriana Maysaloon. Raha tsy resahina ny tsy fandefera-tsaina, tahotra, ary ny dikan'ny maritrano, dia manome hevitra tahaka izao  ny mpamaham-bolongana:
Tsy ny fanavakavahan'ny Soisa na ny hevitry ny maritranon'ny minaret ara-pivavahana loatra no tena zava-dehibe amin'ity tantara ity. Ny tena zava-dehibe dia sambany tao anatin'ny 400 taona izay, hatramin'ny nanaovan'ny Ottomans fahirano an'i Vienne fa manana raika mibaribary ny Miozolomana any Eoropa.
Ary dia nasongadin'ny mpamaham-bolongana amin'izay ny fomba nitarihan'ny Islam ny “tandrefana” sy ny mifamadika amin'izay ka nanaovany tsoa-kevitra fa:
Fehiny, tsy manahy ny tsy mahalefitra aho. Azo raràna ny minaret sy ny sharia [lalàna silamo], azo rovitina ny sarondoha ary tsy mahafoana ny zavamisy hoe efa ao Eoropa, any Amerika, ary mieli-patrana maneratany Islam izay sariitatra mivoaka rehetra.
Hamaranana azy ny hevitr'ilay maoritaniana mpampiasa Twitter weddady rehefa nivoaka ny valin'ny fitsapa-kevi-bahoaka sady mamehy ny fahatsapan'ny maro. Hoy izy , ” Tsy misy afa-mandà intsony amin'izao ka hanao hoe tsy manana olana amin'ny miozolomana i Eoropa, ary tsy misy afa-mandà ny fitomboan'isan'ny miozolomana any.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/12/04/4368/
 Namoaka lahatsoratra: http://middleeast.about.com/b/2009/11/29/islamophobe-swiss-ban-minarets.htm
 nafehiny fa: http://blog.hichamaged.net/flying-with-black-wings/
 malahelo izy: http://notgr33ndata.blogspot.com/2009/11/swiss-identity.html
 ka mamelabelatra: http://quitealone.com/2009/11/30/swiss-rolled/
 ka manamarika fa: http://themoornextdoor.wordpress.com/2009/11/30/on-the-minaret-ban/
 manome hevitra tahaka izao: http://maysaloon.blogspot.com/2009/11/swiss-have-voted-against-building.html